Coronavirus 2 maty, 12 ny tranga vaovao
Antananarivo 398 indray no tratra tsy nanao arotava
Mbola tsy foana tanteraka ny valanaretina Covid 19 eto amintsika. Ny mahavariana anefa dia mihabetsaka ireo tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana intsony toy ny fanaovana arotava…
Dr Marius Ramaroson “Vaksiny tena izy ihany no haharesy ny Covid 19”
Aretim-pitranga mialohan’ny rotsak’orana sy andron’ny zakarandahy ary felam-paiso toy izao, hoy ny dokotera Marius Ramaroson, ireo aretin’ny fitaovam-pisefoana. Eo ny “allergie” dia eo koa ny areti-kibo.
Vaksiny Covid 19 Maty ilay dokotera Breziliana nanaovana andrana
Maty ilay dokotera nanolo-tena nanaovana andrana amin'ny vaksiny covid-19 tany Brésil.
Analamanga Ho voasazy indray izay tsy manao arotava
Efa betsaka ireo olona tsy manao arotava intsony eto amintsika. Anisan’izany ireo mandehandeha eny amin’ny arabe. Ireo tsy maintsy mandeha fiara fitateram-bahoaka sisa no manao izany noho ny fiheveran’ny sasany fa efa foana tanteraka ny areti-mandoza Covid 19.
Covid 19 Madagasikara 6 no maty, 158 no voa tao anatin’ny herinandro
Nambaran’ny tatitra ofisialy ny sabotsy lasa teo fa nisy tranga vaovao 158 tamin’ny fitiliana miisa 2252, notanterahana ny 17 ka hatramin’ny 23 oktobra.Nisy marary 06 namoy ny ainy, raha toa ka 86 ireo sitrana.
Sidina anabakabaka Firenena 10 tsy tafiditra eto Madagasikara
Firenena 10 no hita ao amin'ny lisitr' ireo firenena izay tsy nahazo alalana hiditra eto Madagasikara, araka ny naoty navoakan` ny Aviation Civile de Madagascar (ACM) omaly ho an'ny kaompaniam-pitaterana anabakabaka: Allemagne, Belgique, Espagne, Frantsa, Italia , Pays Bas, Pologne, Royaume-Uni, Rosia ary Ukraine.
Ady amin’ny covid 19 Nanolotra fitafiana mitentim-bidy 950 tapitrisa Ar i Korea Atsimo
Manohana hatrany an’i Madagasikara amin’ny ady amin’ny covid19 ry zareo Koreana Tatsimo.
Niampy roa ny olona lavon’ny coronavirus, ka ny 01 teto Analamanga, ary ny 01 hafa tany Diana, raha ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly.
213 izany ireo lavo hatramin’izay manome taham-pahafatesana 1,35% mitaha amin’ny tranga hatramin’izay miisa 15 769. 71 478 ny fitiliana hatramin’izay, ary 15769 kosa ireo efa voa, izay manome taham-pahavoazana ankapobeny 22,06%. Miisa 12 ny tranga vaovao omaly, azo tamin’ny fitiliana 506, izay manome taham-pahavoazana 2,37%. Azo ambara ho ambany ny tranga sy ny taham-pahavoazana omaly. Teto Analamanga ny 09 tamin’ireo tranga vaovao, ary ny 03 kosa tany Boeny Faritanin’i Mahajanga.
1143 NY MBOLA TSABOINA
Miisa 43 ireo sitrana vaovao, ka ny 09 teto Antananarivo (05 Analamanga, 04 Vakinankaratra) ; 02 Toamasina Faritra Antsinana, 13 Fianarantsoa (08 Manakara Faritra Vatovavy Fitovinany, 05 05 Faritra Amoron'Imania) ; 12 Mahajanga (02 Boeny, 08 SOFIA ka ny 06 Antsohihy, 2 Mandritsara, 01 Melaky, ary 01 Betsiboka), ary 07 Antsiranana ao anatin’ny Faritra Sava avokoa. 14 411 ny sitrana hatrizay manome taha 91,38%. Miisa 1143 kosa no mbola manaraka fitsaboana, manome taha 7,24%. Nihena 4 ny "forme grave" mitaha amin’ny afak’omaly, ka 30 izany amin’izao fotoana izao. Ny 17 eto Analamanga, 01 Vakinankaratra (Antsirabe), 08 Matsiatra Ambony (Fianarantsoa), 01 Atsimo Andrefana (Toliara), ary 03 DIANA.